အရာအားလုံးကိုပြုပြင်ဖို့ကြိုးစားနေ | Linux မှ
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤရှုပ်ထွေးမှုတစ်ခုလုံးကိုဖြေရှင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်၌ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အပြောင်းအလဲများကိုစတင်ပြုလုပ်သော အချိန်မှစ၍ အချို့သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုထပ်မံမြင်တွေ့ရဖွယ်ရှိသည်။ လောလောဆယ်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်သည်အပြည့်အဝရရှိနိုင်သည် ဘ‌‌လော့ခ်။ အခြေအနေကအပူတပြင်းဖြစ်နေပြီ။ ရိုးရှင်းသည့်အရာဟုထင်မြင်ယူဆရသည်ကပရမ်းပတာဖြစ်သွားသည်။ ဤအမှုအလုံးစုံအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တောင်းပန်ပါသည်။ 🙁
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » အရာအားလုံးကိုပြုပြင်ဖို့ကြိုးစားနေ
Elav၊ သင်အကူအညီလိုလျှင်ကျွန်ုပ်ကိုယုံကြည်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကွန်ယက်စီမံခန့်ခွဲမှုသို့မဟုတ်ပရိုဂရမ်းမင်းအကြောင်းဘာမှမသိသော်လည်းကျွန်ုပ်သည် twitter၊ Facebook နှင့် G + တို့တွင်လည်းကောင်း၊
အထက်ဖော်ပြပါအသုံးပြုသူကိုယ်စားလှယ်ကပြသထားသောအရာများ (distro နှင့်ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာ) သည်ထက်ဝက်ကိုဗဟိုပြုမထားမှီ (ညာဘက်တွင်) ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးပြီးဖြစ်သည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် invisible15 ။ မနေ့ကငါပေါ့ပေါ့ပါးပါး code ကိုညှိဖို့အခွင့်အလမ်းကိုယူ။ , ဒါပေမယ့်ငါနေဆဲပုံရိပ်တွေကိုပြုပြင်ရန်ရှိသည်
ပြောတာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Elav တစ် ဦး အစီအစဉ်လုပ်ပုံနှင့် ... ကအားလုံးကိုမှ fixed ကြရပေမည်
ငါမသိသောဘာဖြစ်သွားသနည်း @elav, မင်းရဲ့အပူတပြင်းပြproblemနာကဘာလဲ။ တစ်ခုခုကူညီနိုင်မလား?
ahahaha အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မည် ??? အရာအားလုံးအဆင်ပြေတယ်ဆိုတာငါတွေ့ပြီ။ သင်အကူအညီလိုလျှင်နောက်တစ်ကြိမ်အီးမေးလ်ပို့နိုင်သည်။
စိတ်မကောင်းစရာမဟုတ်ပါအေးအေးဆေးဆေးသူငယ်ချင်း၊ ဘလော့နှင့်ဖိုရမ်နှင့်ကိုက်ညီသောကျွန်ုပ်တို့နှင့်ကျွန်ုပ်သည်လူအများစုအတွက်ပြောဆိုသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်မြစ်ကြောင်းနားတွင်ဆက်ရှိနေမည်၊ ဤပြproblemနာသည်ထာဝရတည်တံ့မည်မဟုတ်ပါ၊ အကူအညီအားလုံး ငါပေးနိုင်တာကမင်းရဲ့သဘောထားပဲ။ အရာရာအားလုံးကောင်းကောင်းထွက်လာမယ်ဆိုတာငါအပြည့်အဝယုံကြည်တယ်။
နင်ကတိတ်ဆိတ်နေတယ်၊ ​​ငါလပေါင်းများစွာမှာငါပိုင်တဲ့အသင်းအဖွဲ့ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုလက်ခံသည့်ဆာဗာနှင့်လည်းငါ၌ရှိသည်။
Oscar ပြောသည့် Relaaaax ဘလော့ဂ်နောက်ကိုလိုက်သောသူများသည်ပြproblemနာအနည်းငယ်ကြောင့်၎င်းကိုမရပ်တော့ပါ။
ရဲရင့်ခြင်း၊ ဤနည်းအတိုင်းဆက်လျှောက်လှမ်းပါ။ အချိန်အတန်ကြာသူတို့နေ့စဉ်လုပ်ရမည့်အလုပ်ဖြစ်လာပြီ။
မည်သူသည် Troll ကိုတောင်းပန်လိမ့်မည်နည်း။ Troll သည်ရိုက်နှက်ခံရသည်။ တောင်းပန်ခြင်းမရှိပါ။ ဟူးဟား .. Eduar2 အရေးမကြီးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့လည်းသင်နှင့်တူတူချစ်ကြသည်😀
ကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ပံ့သူနှင့်အားပေးသူအားလုံးကို - ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဤပြproblemsနာများကိုတင်ပြခြင်းဖြင့်ဘာမျှမဖြစ်နိူင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာလေးနက်မှုမရှိပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်သင်နှင့်မျှဝေခြင်းတို့ကိုမပြုလုပ်လိုပါ။ 🙁
အကယ်၍ Arch Linux စာမျက်နှာက၎င်းကဲ့သို့ခံစားမိပါကပြိုလဲသွားလျှင်၊ အဖွဲ့အစည်းမရှိသောသို့မဟုတ်ဘတ်ဂျက်ကျဆင်းခြင်းသည်ဘာမှမဆိုလိုပါ။
၎င်းသည် Arch with ပါသည့်ဆာဗာများပေါ်တွင်သေချာစွာအလုပ်လုပ်သည်
lol သူတို့ Debian ဆာဗာတွေပေါ်မှာမ run ဘူး၊ သူတို့တည်ရှိနေတဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုခင်ဗျားသိတယ်။ 😀
KZKGGaara ၏လက်ပ်တော့ပ်ဖြင့် Arch နှင့်အတူဘာတွေမှားနေမှန်းသင်သာသိလျှင်၊
ဘာမှမျှော်လင့်မထားပါနဲ့, ငါဒီ eso အကြောင်းကို post တစ်ခုလုပ်ပါလိမ့်မယ်
Man လားသူ Alaska မှာပါ .. မင်းငါ့ကိုကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စတွေမပြောနိုင်ဘူးလား? ငါလာမယ့်သင်တို့ကိုငါသူကပြောတယ် !!!
Hmm .. ငါဖိုရမ်ဒါမှမဟုတ်မိုက်ခရိုဘလော့ဂ်ထဲဝင်လို့မရဘူးလား။
ကျွန်ုပ် XD ကိုပိတ်ပင်ထားသည်
@elav ဂါနာနှင့်သူ၏ Arch သည်ဘာဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ကိုပြောပြပါ
Arch နှင့်အတူ gritty ဖြစ်ပျက်ခဲ့သလား ဘာ pton hahahaha ။
ယခု Hahahaha သည်အခါအားလျော်စွာဘာတစ်ခုမှမထိတွေ့ဘဲမွမ်းမံခြင်းမရှိဘဲ Bash က (တစ်ခါတစ်ရံ) မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးအနက်ရောင် Hahahaha မှထွက်ခွာသည့် console တွင်အမှားတစ်ခုပေးသည်။
Debian နှင့်အခြား Debian၊ hahahahaha ။
windows server 😛 ajjajajajaja ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုရပ်ပါ
ဟားဟားကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူငယ်ချင်း၊ really ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဒါဟာမနာလိုလူကြီးနှင့်စူပါ Debian ဘလော့ဂ်တင်နေသည်ပုံရသည်
ပြီးတော့အဲဒါကို Unnamable ကိုသုံးဖို့ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးတော့ ubuntu, HAHAHAHAHAHA အကြောင်းမကောင်းဆိုးဝါးကိုပြောနေတာ။
Ubuntu ကိုသုံးရန် Unnameable ကိုအကြိမ် ၁၀၀၀ ပိုနှစ်သက်သည်။
ခင်ဗျားကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရင်အရေးမကြီးဘူး၊ မင်းရဲ့ပါ ၀ င်မှုမရှိဘဲဘလော့ဂ်ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲလို့ကျွန်တော်တွေးမိတယ်။
ဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မသိခဲ့ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒီကြီးကျယ်တဲ့စီမံကိန်းနဲ့လည်းကျွန်မရဲ့ထောက်ခံမှုကိုပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ စပိန်လိုအကောင်းဆုံး linux ဘလော့ဂ်။ ငါက ... xD
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Ozcar ^^
Infographic: ပုံတစ်ခုတည်းဖြင့် GNU / Linux ၏သမိုင်း
Ubuntu Dash အတွက်မှန်ဘီလူး